Jaaliyadda Soomaalida Zwolle & nawaaxigeeda oo dooratay Guddi cusub [SAWIRRO] | YoobsanNews.com
Doorasho qof iyo cod-kii ah, oo ay ka qeybgaleen tiradii ugu badneyd ee ka tirsan Jaaliyadda Soomaalida Magaalada Zwolle iyo nawaaxigeeda ayeey 2 sanno oo hor leh u doorteen Guddoomiyihii hore ee Jaaliyadaasi C/qaadir Cali Nuune. Sidoo kale, waxaa Guddoomiye ku-xigeen & Xisaabiye loo doortay C/nuur Faarax & C/qaadir Qandac.
Kulanka doorashada oo lagu qabtay Magaalada Zwolle, waxaa ka soo qeybgalay xubno ka socday [Gemeente-huis] Zwolle & wakiilada xisbiyadda mucaaradka u fadhiya Gobolka Overijsel.
Xubno ka tirsan Jaaliyadda oo kulanka ku micneeyey sababaha dib loogu doortay Guddoomiyaha inuu yahay shaqsi howlkar ah, isla markaana muddadii uu metelayey Jaaliyada waxqabadkiisu uu gaaray guri walba oo qoys Soomaali ahi degan yahay, isaga oo ku guuleystay dedaalo lagu badbaadinayey ubad Soomaaliyeed.
“Haddii aan habeen 8 saac u baahano wuu na soo gaaraa, waa shaqsi Soomaalidu isugu mid tahay, qof kasta ee Soomaali ah oo dhibaateysanna garab siiya; dadkeena Soomaalida wuxuu inoo yahay C/qaadir Nuune raasumaal, waanna sababta ay dadkii kulankani ka soo qeybgalay ay isugu raaceen in dib loo doorto” Ayeey tiri Farduus Raalto.
C/qaadir Nuune oo kulankaasi ka hadlay wuxuu u mahadceliyey dadkii kalsoonida siiyey, wuxuuna tilmaamay in 2-dii sanno ee la soo dhaafay Guddigoodu in ay qabteen shaqooyin culus, wuxuuna balanqaaday in qorshaha cusub ee Jaaliyaddu tiigsaneyso ay ugu horreeyso sidii loo heli lahaa xarun u gaar ah Jaaliyada Soomaalida, goob dhalinyaradu ku ciyaaraan isboortiga & xarun haweenka Soomaalidu ku kulmaan.
Inkastoo doorashadaasi aysan goob joog ka aheyn aasaasayaashii Jaaliyadda, haddana waxa ay marqaati u aheyd taageerada baaxada leh ee Guddoomiyaha la doortay C/qaadir Nuune uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaalida ee degan Magaalada Zwolle & Magaalooyinka ku xeeran.
Xuquuqda sawirada: Waxaa iska leh: Suxufi Bashiir Jiilaal
Previous: Miyeeysan aheyn in wax la iska weydiiyo inta jeer ee Wasiir C/raxmaan yariisow ku dhacay gefaf been abuurasho ah.?
Next: Axmed Hayaan oo ka hadlay khilaaf ka dhex aloosan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Zwolle & Nawaaxigeeda [WAREYSI]